Kangakanani Ingaba a Lawyer Iindleko: Yonke into Ufuna Ukwazi - Zonke abaqondisi-mthetho ehlabathini! Isemthethweni rock kunye abaqondisi-mthetho kwi-intanethi.
Xa abaxhasi zibuze, 'kangakanani ingaba a lawyer iindleko,' impendulo unako vary ukusuka dollazi ukuya dollazi okanye ngaphezulu ngeyureKodwa ukuba ukhe ubene iyonela kububanzi bephepha a ngokusemthethweni lo mba, besebenza a lawyer kakhulu eluncedo kwaye oku kuchaphazela isiphumo meko. Phambi hiring a lawyer, kufuneka bathethe kuye okanye yakhe malunga imali schedules, cambalala-umyinge vs. contingency imirhumo, ballpark ingqikelelo xa iyonke indleko ngokusekelwe meko. Inyaniso yile yokuba abaqondisi-mthetho' iinkonzo asingawo cheap, akukho mcimbi loluphi uhlobo isemthethweni meko ufuna iyonela kububanzi bephepha.
Nkqu elula iimeko unako iindleko eziliqela amabini dolla, kwaye imirhumo ngakumbi complex iimeko unako ngokukhawuleza rival ixabiso elincinane luxury car.
Njengokuba ufunda cinga kangakanani a lawyer uza iindleko, cinga indlela kakhulu kufuneka ukuchitha kwaye yintoni isiphumo ngu kukunceda kakhulu kuwe.
Umzekelo, ukuba ukhe ubene ukucinga ethabatha isemthethweni intshukumo ngokuchasene kuyo ushishino ukuba akazange nokulungisa yakho refrigerator kakuhle, ingaba unayo imali eyaneleyo ekhoyo ukuba hire a lawyer, anike ubungqina, kwaye get inkundla ukuba umthetho yakho ukuthandwa.
Nkqu ukuba ingaba unayo imali eyaneleyo, kwinto yonke iindleko ukutshintshwa i-refrigerator okanye ekubeni umntu ongomnye nokulungisa kuya kukunceda kakhulu i-trade-ngaphandle. Xa usenza phambili kunye neenkqubo zomthetho intshukumo, okanye ufuna uncedo kunye neenkqubo zomthetho mba, buza bonke enokwenzeka abaqondisi-mthetho ukuba ufuna kuhlangana kunye ne-zabo yentlawulo iindlela ezilungileyo kwaye imirhumo. Ukuba lawyer akazimiselanga ukuxoxa iindleko kunye nawe, ke umqondiso ka-amahlwempu umxhasi inkonzo. Ulwaphulo-mthetho iimeko ngokuqhelekileyo kuwa phantsi cambalala imali okanye iiyure yentlawulo bokusebenza.
Ngenxa yolwaphulo-meko rhoqo ngakumbi intricate, pricing kunye contingency imirhumo akuthethi ukuba ngenene yenza umqondo.
Ezinzima, ulwaphulo-mthetho iimeko rhoqo kufuna ezininzi isemthethweni iingxoxo, ezifana esa kundoqo kwetyala, jury ukhetho, linge, writs kwaye ibongoza, kwaye sentencing, ngoko ke inkqubo banokuthatha zidlulileyo. Abaninzi, ulwaphulo-mthetho abaqondisi-mthetho abo kwentlawulo yi-ilixa liya kufuna a retainer imali. Ukongeza kwi-iiyure imirhumo okanye cambalala-umyinge imali ibe igcwalisiwe yi-a lawyer zolwaphulo mthetho kunjalo, umxhasi rhoqo sele ukuhlawula enye inkcitho, ezifana: iyonke indleko a lawyer kuxhomekeke imiba eliqela, ibaluleke kakhulu apho yindlela yentlawulo indlela. Ukuba ufuna bafunyanwa hayi benetyala, okanye acquitted, ngaphandle kwentlawulo, nibe? kufuna enye isemthethweni iinkonzo kuba arrest kwaye okanye imirhumo isuke imbali yakho. Uninzi ulwaphulo-mthetho abaqondisi-mthetho ngaphandle kwentlawulo efanayo imirhumo ukuba uhlale competitive, kodwa iimeko ezithile ingaba ngakumbi complex kwaye yomamkeli, ngoko kuza kufuneka wenze isigqibo ilungelo kude. Xa ufuna hire a lawyer, kuya kuba kokukhona kunzima lungelelanisa yentlawulo indlela okanye imirhumo. Phambi ukhetha a lawyer, abo imirhumo yi-ilixa, qiniseka ukuba ucele ukuba lowo okanye yena inxenye ilixa kwi umzuzu okanye -ngomzuzu increments. Oko uba ebalulekileyo xa ufuna ukwenza ifowuni ngefowuni okanye ukufumana emfutshane uhlaziyo, ukususela amahlanu-ngomzuzu umnxeba ayikwazi iindleko dollazi xa ibe igcwalisiwe nge dollazi -ilixa lawyer waphula ixesha kwi ngomzuzu increments. A lawyer abo imirhumo efanayo iiyure umyinge kodwa inikezela -ngomzuzu increments ingaba kwentlawulo dollazi (iiyure bezinga dollazi) ukuba efanayo umnxeba. Ukuqonda iindleko a lawyer phambi kokuba angene kwisivumelwano kungasinceda kuthintela unpleasant surprises okanye iindleko ukuba awukwazi afford. Abanye abantu babe ukuqala ukusebenza kunye umtshutshisi, kuphela ukufumana ukuba i-imirhumo ingaba iyanyuka dramatically. Wena musa ufuna ukubeka ngokukhawuleza-mali strain kwi ngokwakho okanye usapho lwakho, okanye ufuna ukuba kufuneka ifayile bankruptcy okanye athabathe amanye amanyathelo asemthethweni ukufumana ngaphandle ityala.
Inkcitho kwaye inkundla iindleko yongeza phezulu ngokukhawuleza, ngoko ke thetha nayiphi na kwezo meko lawyer kwi-inkcukacha malunga kulindeleke ukuba iintlawulo kwaye iindleko.
Get a ukubhalwa uqikelelo kwaye qiniseka ukuba uquka izinto ngathi kweenkonzo imirhumo, inkundla iindleko, wachitha ixesha kwi meko yi-paralegals kwaye okanye isemthethweni secretaries kwaye filing imirhumo. Ukuba ezi aren khange iqukiwe ngomhla ngu uqikelelo, qiniseka ukuba buza Ungathi end phezulu nge eyahlukileyo mthetho, ngaphandle kokuba igqwetha lakho absorbs i-ezingaphezulu iintlawulo kwi ityala lilonke. Ke ukukhumbula qiniseka ukuba iindleko lawyer ngu kukunceda kakhulu kwinto yonke iindleko ityala kwaye yintoni ungakwazi recoup. Umzekelo, ukuba ufuna ukuba uzama ukuba ifayile bankruptcy kuba ityala ka-dollazi, mhlawumbi musa ufuna hire a lawyer abantliziyo uqikelelo iza kwi-e-dollazi. Abantu abaninzi akunayo ngokwaneleyo imali hire a lawyer kuba isemthethweni uncedo. E-United States of America inikezela amalungelo ayo abemi, ngokuba Miranda Amalungelo okanye Miranda Isilumkiso. Phantsi Miranda Isilumkiso, ummi unelungelo umtshutshisi Ukuba lowo okanye yena akanako afford omnye, umtshutshisi iya kubonelelwa. Ngoko ke, ukuba ufuna ukufumana ukuba ufuna aren ukuba nako ukuhlawula kuba isemthethweni imirhumo enxulumene neakhawunti yakho, ulwaphulo-mthetho kunjalo, nibe bafanele kuba oku icebo. Low-ingeniso abaxhasi unakho ngokunjalo bafanele kuba free isemthethweni uncedo ngendlela ethile iintlobo iimeko, kuquka wokuqhawula umtshato kwaye landlord-tenant disputes. Attorneys kwaye umthetho firms babe dedicate ipesenti ethile yabo ixesha pro bono (okanye free) umsebenzi kuba abaxhasi abo uncedo. Khangela i-intanethi kuba abaqondisi-mthetho kwindawo yakho abo babe kunikela kwezi nkonzo okanye uqhagamshelane urhulumente bar association. Ukuba ufuna musa bazive ethambileyo kunye othile lamagqwetha, musa hire kuye okanye kwayo nje ngenxa yokuba ixabiso ikhangeleka ekunene. Iindleko lawyer uza ngokuqinisekileyo ifekta kwi isigqibo sakho kodwa khumbula ukuba cheaper ayilingani ngcono. A lawyer abo imirhumo ngaphezulu ngeyure enokuba ngaphezu amava kunye iimeko iyafana zezenu. Attorneys abakhoyo nje iqala zabo ukuba babe kwentlawulo ngaphantsi, kodwa ngaphantsi imali rhoqo iza kunye ngaphantsi amava. Kodwa kufuneka kanjalo uphephe kokuya kwi ezinzima ityala yi-hiring a lawyer awunokwazi afford. Xa usebenzisa a lawyer nangaluphi na uhlobo isemthethweni proceeding, ngoku kuba umntu egameni lakho icala oqonda complex inkqubo esemthethweni. Kwa into ukuba ikhangeleka elula, njenge filing kuba custody okanye kokudlula a wokuqhawula umtshato, unako ngokukhawuleza kuba enzima kwaye ama. Iinkundla ngendlela ezahlukeneyo states kufuna ezahlukeneyo uxwebhu kwaye iifomu kufuneka ezenziwe sesi sibini, kwaye abantu abaninzi nje akunayo ifemi ukuqonda ezi iimfuno. Xa usebenza nge-i-experienced lamagqwetha, lowo okanye yena uya ukuqonda oko kuyimfuneko kwaye njani ukukhombisa u-zonke iimfuno kakuhle nangexesha elifanelekileyo. Yakho lawyer kanjalo unako ukunceda yaphula phantsi enobunzima isemthethweni iifomu, mimiselo, iingxoxo kuba kuni. Kwi- phando lwenziwa ngo-Inshorensi Research Council, i-data yabonisa ukuba abo bazuza isemthethweni ukumelwa wafumana. umphinda-phinde ngo ngakumbi septemba imali kwi-personal injury iimeko kunokuba abo babengengabo. Ngaphandle isemthethweni ukumelwa, ungakwazi unobuhle a ngenxa umhla kuba iifomu okanye amaxwebhu, ebangela delays yakho meko okanye kwa ruling ukuba ayikho yakho ukuthandwa. Ezona ngokufanayo ingxaki ukuba iza phezulu phakathi abo musa hire abaqondisi-mthetho igqityiwe isiphithiphithi njengoko oko kufuneka senze ukuvala ngaphandle ityala. Ungakwazi end phezulu limbo, andiqinisekanga ntoni ukwenza elandelayo okanye apho kuya kuba uncedo. Wokuqala ngena kwi-ingxowa-ngaphandle kangakanani a lawyer uza iindleko ngu cwangcisa iintlanganiso zokubonisana. Abanye kunikela free iintlanganiso zokubonisana, ngeli lixa abanye baya kwentlawulo encinane imali kuba lokuqala ntlanganiso. Ngeli luhlomle kuwo, kufuneka anike zonke iinkcukacha ezinxulumene yakho meko kwaye ucele ngolwazi oluthe vetshe malunga yentlawulo kwaye uqikelelo iyonke iindleko. Ukuba ufuna uncedo kunye kangakanani a lawyer iindleko, uyakwazi ngeposi yakho umsebenzi kwi Phezulu Ingcebiso ke marketplace. Phezulu Ingcebiso isamkele kuphela phezulu ipesenti ye abaqondisi-mthetho yalo ndawo. Abaqondisi-mthetho kwi Phezulu Ingcebiso bevela umthetho izikolo ezifana Harvard Umthetho kwaye Yale Umthetho kwaye avareji ubudala neenkqubo zomthetho amava, kuquka umsebenzi kunye okanye egameni iinkampani njenge Google, Stripe, kwaye Twilio.
Njani ukuze Ufumane Ubungqina Ubumi